Sheerarka DPW iyo Ethiopia oo isku ah 70% Waxay Shiiqinayaan Somaliland oo aan weli la ictiraafin. qalinkii A/rahman fidhinle UK
Friday March 30, 2018 - 10:53:11 in by Samiir Cabdi
Shirkada DPW waa shirkad dawladeed, waxaana ay ku shaqeysaa istiraajiyad dawladeed oo ku dhisan ilaalinta Dekedaheeda iyo danaheeda dawladeed. hadaaddaalacato mareegaha shirkadan waxaa kuu cadaanaysa in Shirkada DPW ay tahayHayada u xilsaaran Dekedah
Shirkada DPW waa shirkad dawladeed, waxaana ay ku shaqeysaa istiraajiyad dawladeed oo ku dhisan ilaalinta Dekedaheeda iyo danaheeda dawladeed. hadaaddaalacato mareegaha shirkadan waxaa kuu cadaanaysa in Shirkada DPW ay tahayHayada u xilsaaran Dekedaha imaaraatiga.
Shirkada DPW waxay sameysaa marka ay la wareegto Dekedaha yar yar ee Africa Shirkado yar yar oo sameys ah sida shirkada PIO ee hada u maamusha Dekeda Boosaaso ee Puntland. Shirkada DPW waxaa kale oo ayhoosta ku wadataa shirkado yar yar oo macaash doon ah oo magaceeda kuxagafsada kuwaasoo xaalufiyaKaluunka iyo macdanaha kala duwan ee dhulka hoostiisa ku duugan.
Heshiiska Somaliland la gashay shirkada DPWorld iyo Ethiopia waxaa loo arkaaheshiis aan laga fiirsan waanamid halistiisa wata oosoo wajahayqaranimadaiyoqowmiya da Somalilandmaadaama ay Ethiopia ka mid noqotay isbaheysiga carbeed sheerna ku yeelatay. Sheerka ay Eithiopia ku yeelatayDekeda Berbera waa arin xaas -xaasi ah waana arin lid ku noqon karta madaxbanaanida iyo jiritaanka JSL waxaana ay labadan wadan oo iskaashadaa ay Somaliland ku sameyn karaan shiiqin (domination) Maadaama sheerarkoodu isku yihiin70%oo ay sidan uyeesheen51% DPW iyo 19% Eithiopiawaxaana ay sheerarkooda ka sii iibin karaan wadamo kale iyo shirkado kale .Waxay labadan wadan ay shirkadahoodayar yar ee uga shaqeeyaJabal-Ali iyo Dooraalekeeni doonaan Suuqa xorta ah ee Berberalaga furi doonotaa soo ah midaan dhiirigelineyn kobocadakhliga dowlada iyo kobcinta dhaqaalahacurdinka ah ee Somaliland .
Boowe !Heshiiskangogol xaadhkiisiiiyo maareyntisiiba wuxuu la kowsadayhadalo is burinaya:
Waxay sheeko xariirta inoogu bilaabeenin DPWmarsada Berbera ku maalgelinayso$442 Million
Waxaa ku xigtaywejiga hore way inoomaamulayaan mudo sanad ah,taasooay ka faai'deen lacag badan.
Hadana Kuy'emaalgashiga dhabta aheeDPW kubalaadhinayso dekeda Berbera waa$230 Million !
Kuy'e DPW waxaySuuqa xorta u qoondeysay in ay ku baxdo lacag dhan $25 Million!
Lay'e Dawlada Eithiopia waxay ku maalgashanaysaamashruuca berbera corridorlacag dhan$80 Milion!
Laye Shirkada DPW waxay Berbera Corridor u qoondeysay maalgelin dhan $80 Million?
Ku-ye guud ahaan Kharajka ku baxaaya wada Berbera Corridor waa lacag dhan$240 Million?
Lay'e Somaliland oo ilaahay xaalkeeda ogyahay waxay bixin doontaaqaybteeda oo dhan$14 million
Lay'eSomaliland way ka cudur daaratay lacagtaaku badan oo waxay awoodaa$7 millionoo qudha ?
Kuy'e Heshiiskii hore ee DPW ay la gashaySomaliland ayuun buu Heshiiska cusubi ku saleysan yahayoo kasoo xuubsiibtayoo looma baahna in Baarlamaan laga ansixiyo ,hada gara'oo heshiiskii hore wuxuu ahaanuxur yar oo far Somali ku qoran oo qabyo qoraal ah oo ogolaansho uun ahaa.
Hadaba Su'aalaha shacabka Somaliland isweydiinayaan ayaa noqonaysa maadaama mashuuracni yahay mid masiiri ah oo taabanaaya dhaqaalaha iyo amniga muwaadin kasta oo reer Somaliland ah :
1- Maxaa heshiiska sadex geesoodka ah Baarlamaanka Somaliland lookeeni waayey?
2-Maxay Eithiopia inoogu bedelaysaa Saamigeeda oo dhan19% ?
3- Shuruudo noo cee ah ayaa Ethiopia lagu xidhayaa? misexaalku waaaan ka fuudee Alow fiihaa!
4-Maxaa runta looga sheegi waayey in Maalgashigu yahay$230 Millionee aanu aheyn$442 Million?
6- Maxaa muda'daa dheer ee sanadka dhaaftay heshiiskii rasmiga ahaa Golaha Baarlamaanka loo keeni waayey?
7- Shirkada DPW ooDekeda maamuleysay mudo sanad ka badanmaxay u fulin weyday balan qaadyadii heshiiskii hore. 8- Sidee loo maamulayaa mashruuca maadaamaBerbera Port Authoritymeesha laga saaray?
9- Maadaama aanu dalku laheyn Caymis -Maxaaheshiiska loogu cadeyn waayey cida ka masuulka noqonaysa khasaaraha ka yimaada heshiiskagaar ahaan dhibaatooyinka Bay'ada ku yimaada ?
Waxaa Heshiiskii hore ku jiray in la sameyn doono Shirkad ay ku bahoobeen DPW iyo Somaliland oo lagu magacaabi doonoBerbera Port Authoritytaas oo yeelan doontagudi ama (board of Directors) hadaba meeday shirkadaasi ? ma waxaa liqday shirkadiiSomaliland investment Company? mise xaalkuwaa ka noqoheshiisku waa sadex geesood eh ? Yaa u fasaxay in Sheerkii Somaliland oo ahaa35%in 5%Eithoipia laga iibiyo iyada oo aan la soo marin hayadihiidastuurigaahaa ? Yaa ka mabnuucaya in Ethiopia Ciidan hantideeda u ilaaliya ay iyana dalkeena keensato oo saldhig ciidanku yeelato? Maxaa Ethiopia oo aynu jaar nahay oo Dekeda Berbera isticmaaleysay mudo dheer ay sheerka inoo weydiisan wayday ee DPWu weydiisatay ? Timir laf baa ku jirta !! Arimahan badan ee mugdigu ku jiraa waxay kuu cadeynayaan in heshiisku yahayHeshiis Siyaasadeed oo aad u qorshaysanoo aanay Somaliland ka fiirsan quwadaha ku tartamaya istiraatiijiyada dalka ,qiimahakheyraadka dalka iyo Dekeda Berbera oo dhacda marin muhiim ah.
Waxaa ummadda u cadaatay in DPW ay leedahay dano dhaqaale iyo ujeedooyin kale oo gaar ah, markaa si ay danaheeda gaar ka ah ufushato ayey dawlada imaraatigu Ethiopia inoo soo qayd-xanbaartay oo hantideeniiinagula shuraakoowday. Waxaana mushtamaca Somaliland u cadaatay in shaxda iyo loolanka Dekeda Berberaiyo Saldhiga ciidan ka danbeeyaaaanu aheynmid Somaliland wax ka qaban kartoee uu xaalku yahay mid daaran dagaalka baahsan ee u dhaxeeya quwadaha waaweynee ku hirdamaaya marinka gacanka cadmeed oo ah goob isu socodka aduunka qiime weyn ugu fadhida.
Gunaanad:Hadii ay Shirkada DPW balaadhin iyo casriyeyn mug-lehku sameynayso Dekeda Berbera oo ay ka dhabeynayso lama diidana oo waa talaabo horumarineed laakiinse waxaa la diidan yahay in ummadda dabool iyo daah qarsoon laga saaro nuxurka heshiiska Sidaa daraadeed waa in daaha laga feydaa ooHeshiiskan cusub ee sadex geesoodka ah si biseyl siyaasadeed ku saleysan umadda loogu soo bandhigaa faai'dadiisa oo Baarlamaanka Somaliland la hor keenaasi ay u naaqishaan nuxurka heshiisku xanbaarsan yahay una saxaan wixii madmadow kugedaaman ka dibna u ansixiyaan.